စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု & စီမံကိန်း
စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု & စီမံကိန်း Toolkit ကို
ထောက်ပံ့ငွေနှင့်နမူနာ Applications ကို
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး / စိမ်းလန်း Initiatives
အိမ်ရာ / အိမ်နီးချင်းစီမံကိန်း
စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု Links များ
စမတ်ကြီးထွားအရင်းအမြစ် / Links များ
GIS / သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ
GIS / သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာမူလစာမျက်နှာ
interactive Maps ကို
ကှကျ Maps ကို & custom Maps ကို
မြေပုံ & Cartography
စည်ပင်သာယာပြန်ကြားရေးမြေပုံ Access ကိုအစီအစဉ်
Computerized ကို Maintenance စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်
သတင်းအချက်အလက်နှင့် Links များ
ဒီ Project မှအကြောင်း
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Home Page
Unified စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအစီအစဉ် (UPWP)
စီမံကိန်းဖွံ့ဖြိုးရေး Toolkit ကို
Merrimack ချိုင့်ပန်းခြံ & စီးနင်းလောတအညွှန်းကိန်းမြေပုံ
အဆိုပါ Ciclovia စက်ဘီး
MVPC ညစ်ညမ်းမှု Brownfield Properties ကို၏ cleanup ဘို့ EPA ရန်ပုံငွေရှာခြင်းချီးမြှင်
MVPC အလုပ်အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ Dennis DiZoglio အနားယူ
တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းယောဘကိုကြီးထွားနှုန်းပြည်နယ် Averages ကျော်လွန်
Trail Maps ကို
ခေါင်းစဉ် VI ကို / Nondiscrimination
ခေါင်းစဉ် VI ကိုတိုင်ကြားချက် Form ကို
ခေါင်းစဉ် VI ကိုတိုင်ကြားချက်လုပ်ငန်းစဉ်
၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအသိပေးစာ 2019-2023 အကြံပြုချက်နှင့် FY2019 UPWP
အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Baker MVPC ရဲ့ကရင် Sawyer Conard ခန့်အပ်, အလုပ်အမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး
MVPC ဆောင်းရာသီ 2018 သတင်းလွှာ
Merrimack ချိုင့် MPO အစည်းအဝေး
အဆိုပါ Merrimack ချိုင့်၌စီးပွားရေးအရင်းအမြစ်များနှိပ်
ဓာတုအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် Community ခံနိုင်ရည်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ 2
Merrimack ချိုင့်စီမံကိန်းကော်မရှင် 160 Main Street Haverhill, MA 01830 p: 978.374.0519 f: 978.372.4890 အီး: info@mvpc.org
ဒီစာမျက်နှာ Translate: EnglishAfrikaansShqipአማርኛالعربيةՀայերենazərbaycan diliEuskaraбашҡорт телеБеларускаяবাংলাbosanski jezikБългарскиCatalà粤语BinisayaChinyanja中文(简体)中文(漢字)CorsuHrvatskiČeštinaDanskNederlandsEsperantoEesti keelSuomiFrançaisFryskGalegoქართულიDeutschΕλληνικάગુજરાતીKreyòl ayisyenHarshen HausaʻŌlelo HawaiʻiHmoobHmoob Dawעבריתहिन्दी; हिंदीMagyarÍslenskaAsụsụ IgboBahasa IndonesiaGaeilgeItaliano日本語basa Jawaಕನ್ನಡҚазақ тіліភាសាខ្មែរкыргыз тили한국어KurdîພາສາລາວLatīnaLatviešu valodaLietuvių kalbaLëtzebuergeschмакедонски јазикMalagasy fitenyBahasa MelayuമലയാളംMaltiTe Reo MāoriमराठीМонголမြန်မာစာनेपालीNorskپارسیPolskiPortuguêsਪੰਜਾਬੀRomânăРусскийgagana fa'a SamoaGàidhligCрпски језикSesothochiShonaسنڌيසිංහලSlovenčinaSlovenščinaAf-SoomaaliEspañolBasa SundaKiswahiliSvenskaTagalogТоҷикӣதமிழ்татарчаతెలుగుภาษาไทยTürkçeУкраїнськаاردوOʻzbek tiliTiếng ViệtCymraegisiXhosaייִדישèdè YorùbáisiZulu
Google ကခွင Translate
အဆိုပါ Merrimack ချိုင့်စီမံကိန်းကော်မရှင်အပေါ်စာမျက်နှာများဘာသာပြန်ချက်များ (MVPC) က်ဘ်ဆိုက် Google ကဖျော်ဖြေကြသည်™ ဘာသာပြန်. Google က™ Translate ကွဲပြားခြားနားသောဘာသာစကားများသို့စာသားနဲ့ဝဘ်စာမျက်နှာများကိုဘာသာပြန်ဆိုနိုင်သည့်အခမဲ့အွန်လိုင်းဘာသာစကားဘာသာပြန်ချက်ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်. မဟုတ်ပါစာသားအားလုံးကိုမှန်ကန်စွာဘာသာပြန်ထားသောစေခြင်းငှါသို့မဟုတ်မှာအားလုံးဘာသာပြန်ထားသောခြင်းကိုသတိပြုပါ.
တစ်ဘာသာပြန်ချက်မေတ္တာရပ်ခံသောအခါ ကျေးဇူးပြု. သတိပြုပါ, သင် MVPC က်ဘ်ဆိုက်ထွက်ခွာလိမ့်မည်. တစ်ဘာသာပြန်ချက်ပြည့်စုံသောအခါ, သင်သည်မည်သည့်တိ၏အန္တရာယ်ယူဆ, အမှားများ, သို့မဟုတ်အခြားသောပြဿနာများကြုံတွေ့. MVPC ဖြစ်နိုင်သည်ကို Google အသုံးပြုခြင်းမှဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါမဆိုပြဿနာများကိုသို့မဟုတ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်တာဝန်ယူကျင်းပမည့်မဟုတ်ပါပါလိမ့်မယ်™ ဘာသာပြန်.
သငျသညျကို Google နှင့် ပတ်သက်. မည်သည့်မေးခွန်းများရှိပါက™ ဘာသာပြန်, အောက်ပါ link ကို click နှိပ်ပြီးကျေးဇူးပြုပြီး: Google က™ အမေးအဖြေများ Translate
© 2016 Merrimack ချိုင့်စီမံကိန်း Commision. | မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး
ဝက်ဘ်ဆိုက်ဒီဇိုင်း: ဆိုနိုရာ DesignWorks